China factory na-agbanwe ume iku ume ikpere ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | AoFeiTe
Mgbanwe ikuku ume na-eme iku ume
Njirimara:Breeki, Waterproof Soft, n'echebe
Sample Oge:1-7 daysbọchị Ọrụ
Ọrụ:OEM / ODM-ikpere Nkwado
Brand aha:Nkwonkwo Aofeite
Nha:Free Size-ikpere Aka uwe
Ojiji:Sport Nkwado-ikpere Kedo akwa
Product aha:Ọrụ nke ikpere Nkwado Belt nke Pressureized Silica Gel
Arụpụta:50000 Ibe / iberibe kwa ọnwa
Gbọ njem:Hebei, China (Chile)
Tụkwasịnụ Ikike:50000 Ibe / iberibe kwa ọnwa
Akwụkwọ:CE / FDA / BV / S09001 / S013485
Kemeghi breathable pressurized Ikpere ikpere,Ịdị mma Dị elu Ikpere aka uwe
Na Ikpere ikpere Nkwado na-enyere onye ji ya aka ije, na-agba ọsọ ma ọ bụ na-awụlikwa elu ka ọ na-egwu Bọọlụ Nkata, Bọọlụ, Bọọlụ ma ọ bụ egwuregwu ọ bụla ọzọ ha banyere na-enweghị mkpa imezi ihe nkwado ahụ n'ihi eriri ahịrị silicone abụọ nke ahịrị na-eme Ikpere emem nkwadonọ n'ọnọdụ. Ọ na-ewusi nkwado n'akụkụ abụọ nke ikpere.
1 Mpụga ákwà Họrọ akwa mma akwa, Nkasi obi na ume Ikpere ikpere
2 Inner fabric Mmiri na-agba ajị anụ na-Ekpere ikpere dị jụụ Ndenye ihicha 3 Silicone gasket Buffer nkwonkwo mgbali Equilibrium ike ablenọ na nchekwa 4 Pressureized gbalaga Bidirectional mgbanwe imewe Winding ofu mgbali Mee kwụsie ike 5 Nkwado mmiri na-agba mmiri dị n'akụkụ abụọ Nye nkwado nkwado siri ike na-adịgide adịgide 6 nko na akaghị ihe na-eme ka ike gwụ ike Na-agaghị ekwe ka ọ dị mma
Enwere ike gbanwee bandị akwa ahụ site n'onwe ya
Anyị uru -, elu arụmọrụ development dabere na anyị na-agba ọsọ otu; -, Nye ngwongwo na ọnụahịa dị ala; -, ọrụ dị elu; Anyị na-ekwe nkwa -, ọrụ ọkachamara maka ndị ahịa; -, nye ezi sample ngwa ngwa; -, nye elu mma ọkọlọtọ; -, nnyefe ngwongwo na oge; Ajụjụ 1.Q: companylọ ọrụ gị ọ bụ onye nrụpụta? A: Anyị bụ ndị na-emepụta ngwaahịa, na-ere ngwaahịa anyị ozugbo na ndị cilents anyị. Q: Nwere ike gị ụlọ ọrụ na-enye anyị free samples? A: Ihe nlele maka n'efu, kwụ ụgwọ ụgwọ ibu. 4.Q: Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ị na-anabata? A: Oge ịkwụ ụgwọ-dịgasị iche na ọkwa ọnụahịa na ọnụego niile nke nkwekọrịta ọ bụla.
Na-achọ ezigbo ụlọ ahịa na nchekwa nchekwa Kneepad Manufacturer & soplaya? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. All Nkwado ikpere ikpere dị elu nwere ogo dị mma. Anyị bụ ndị China si Factory nke Soft Motion Kneepad. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Ngwaahịa: Nkwado ikpere ikpere> Knee Nkwado
Nke gara aga: New Style mkpakọ breathable kpara ikpere aka uwe
Osote: Mgbu Ngwa Enyemaka Mgbu Nkwado
Ọkachamara ikpere eji agba bọọlụ maka volleyball maka gel
Powerlifting weightlifting ikpere aka uwe aka ...
Ọkachamara egwuregwu ikpere ụkwụ na mgbochi skid pres ...
Neoprene mkpakọ basketball akwado ikpere br ...
Egwuregwu Mkpuchi Mkpịsị Aka Egwuregwu
Neoprene ikpere igwe igwe ọhụrụ eluigwe na ala eng ...